China Ratten Plastika seza plastika orinasa sy mpanamboatra | HEYA
Ratten Plastika Seza Plastika dia an'ny bobongolo seza eo ambanin'ny lasitra Ratten Plastika Ratten. Araka ny endrik'ireo vokatra isan-karazany dia azo zaraina amin'ny fomba nentim-paharazana sy ny endriny manokana ny Seza bobongolo, toy ny bobongolo seza plastika azo raisina, mpanamboatra bobongolo tsindrona seza, bobongolo seza amoron-dranomasina, sns.
Taizhou Heya bobongolo Co., Ltd dia fitaovana sy maty orinasa ho an'ny bobongolo seza araka ny takian'ny mpanjifa samy hafa.
Manaiky OEM izahay & atolotra miorina amin'ny santionany, na ny sary an-tsary, na ny sary ohatra.
Ny teny nalaina dia hanome fahafaham-po anao amin'ny hatsaran'ny bobongolo sy ny vidin'ny bobongolo.
Manantena fiaraha-miasa matanjaka aminao izahay.
Anaran'ny vokatra Bobongolo seza plastika ratten
F: Ahoana ny fandehanana any amin'ny orinasa misy anao?
A: Afaka mankany amin'ny orinasa Heya Mould amin'ny sidina, lamasinina ary bus ianao.
Manodidina ny adiny 2 ny sidina avy any Guangzhou mankany amin'ny tanànan'ny Taizhou; Adiny 3 amin'ny alàlan'ny lalamby haingam-pandeha avy any Shanghai mankany amin'ny gara Taizhou; adiny 1 amin'ny lamasinina avy any Ningbo na Wenzhou mankany amin'ny gara Taizhou. Adiny 3 na bus na lamasinina avy eo amin'ny gara Yiwu mankany amin'ny gara Taizhou.
F: Inona avy ireo fampahalalana mety ilaina amin'ny teny nalaina tamin'ny bobongolo?
A: Miankina amin'ny vokatrao izany, ka tongasoa ny hifandray amin'i Heya Mould mba hahafaty azy. Noho ny antony, tsara kokoa raha manana ireto fampahalalana ireto ianao etsy ambany:
1, sary santionany misy habe na endrika 2D / 3D
2, haben'ny lavaka
3, karazana Runner, mangatsiaka na mafana
4, karazana vy bobongolo, P20, 718, 2738, H13, S136,2316, sns.
5, masontsivana mason-tsindrona na haben'ny takelaka (halavan'ny tsorakazo)
1) Famolavolana vokatra sy bobongolo
Heya Mould dia hampivelatra sy hamolavola vokatra & bobongolo araka ny takian'ny mpanjifa miaraka amin'ny ekipa R&D efa za-draharaha. Hanampy ny mpanjifantsika izay eo am-pamolavolana vokatra vaovao io, ary hitsitsy ny vidin'ny tetikasa vaovao. Raha mila tsipiriany bebe kokoa, azafady mifandraisa amin'ny dept sales anay amin'ny fotoana rehetra.
2) Famakafakana ny fantsom-bokatra
Heya Mould dia hanao famakafakana ny fikorianan'ny bobongolo araka ny fangatahan'ny mpanjifa, hialana amin'ny olana hafa amin'ny famokarana bobongolo.
3) fanodinana bobongolo
Heya Mould dia hanavao amin'ny mpanjifa ny fitaovana bobongolo plastika mandroso tatitra isan-kerinandro matetika. Ho an'ny toe-javatra manokana dia hifandray aminao avy hatrany izahay.
Heya bobongolo dia manolotra sary bobongolo feno sy kojakoja ho an'ny mpanjifa alohan'ny fandefasana. Ho an'ny kozatra mahazatra, azonao atao ny mijery ny lisitray sy mividy eo amin'ny tsenanao.
5) Sary sy horonan-tsary
Heya Mould dia hametraka horonan-tsary rehetra mihodina mandritra ny 1 taona. Handefa sary sy horonan-tsary ho anao izahay hijerena na hilazana ny fizotran'ny bobongolo.
6) Serivisy sy serasera
Heya Mould dia hifandray akaiky aminao mandritra ny dingana rehetra, manomboka amin'ny fifandraisana ara-teknika amin'ny dingana voalohany amin'ny tetik'asa ka hatramin'ny fanaraha-maso ny fotoana tena izy mandritra ny dingana famokarana ny tetikasa, hatrany amin'ny fanohanana ara-teknika ny vokatra .
Previous: Lasitra seza plastika azo stackable
Manaraka: Bobongolo seza plastika
Lasitra seza plastika azo stackable